induction soldering ithusi | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
induction soldering ithusi
Ukukhishwa Kwezingxube Zengxube
Ukukhishwa kwe-Induction Ukudonsa Izintambo Ze-Copper Nge-IGBT High Frequency Ukushisa Izinyunithi
Inhloso Ukugoqa izintambo ezimbili zethusi ukufaka ama-turrets afakwe ngaphambili kubha yamabhasi ethusi
I-Material Solder icwilise ibha yamabhasi yethusi / ye-nickel, izintambo zethusi ezi-2 ezivalekile, induku yokubopha
I-Frequency 230 kHz
Izinsiza kusebenza • Uhlelo lokushisa lokungeniswa lwe-DW-UHF-6kW, olunekhanda lomsebenzi elikude eliqukethe i-capacitor eyodwa ye-1.2μF.
Inqubo I-coil ye-helical helical split isetshenziselwa ukuguqula umhlangano webhasi lamabhasi. Izintambo ezi-2 zethusi zisetshenziselwa ama-turrets namandla asetshenziswa imizuzwana engama-30. Induku yokubopha ifakwa ngesandla ezingxenyeni ezifudumele futhi isibopho sigeleza ngokulinganayo, kwakheka ukuhlangana.
• Isikhathi se-solder esinciphile
• Ukuhlanganyela ngokuvumelana ngokuhlanganyela
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi high frequency soldering ithusi, ama-high frequency soldering wires, induction soldering ithusi, I-RF i-soldering ithusi, Izinsimbi ze-RF ze-soldering, i-soldering ithusi, ucingo lwe-soldering
I-Induction Soldering Tap ye-Copper
I-Induction Soldering Copper Tap ku-Ring Ring nge-IGBT Induction Heater
Injongo Yethusi ithebhu yethusi kuze kube yilapho i-solder ivuselela.
Ithebhu Yethusi Lokubalulekile 0.25 X 0.25 intshi isikwele cishe ngo-0.05 amayintshi ubukhulu. Izinto zokuhola zamahhala eziholayo (izinga lokushisa eliphakeme kakhulu kune-solder ejwayelekile.)
I-Frequency 286 kHz
Izinsiza ze-DW-UHF-4.5 kW, i-150-400 kHz uhlelo oluqinile lokushisa lokufakelwa olufakwe isiteshi sokushisa esikude esiqukethe i-1.2 μF capacitor kanye nekhoyili yokusebenza eyenzelwe ngokukhethekile ..
Ikhoyili yama-helical ejikajika cishe nge-3/16 intshi yangaphakathi ububanzi eyenziwe ngeshubhu lobubanzi obungu-1/16 intshi.
Inqubo yocingo leSolder ifakwa endaweni yethebhu yesipikha kusetshenziswa i-feeder ezenzakalelayo. Ngemuva kwalokho kuyashiswa ukugeleza kabusha i-solder.
Imiphumela / Izinzuzo Ngokushisa kwe-coil design induction okushisa kufinyelela kalula kuthempelesha yokufisa oyifunayo ngesikhathi esifushane kakhulu.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi high frequency soldering, high frequency soldering ithusi, induction soldering ithusi, ukufakwa kwe-inder soldering, I-RF i-soldering ithusi, i-soldering ithusi
I-Induction Soldering Tube YaseCopper
I-Induction Soldering Tube YaseCopper ne-High Frequency Ukushisa Izinyunithi
Inhloso: Ukushisa isigaba se-3/8 ″ ithubhu yethusi kanye nendololwane engu-900 yokwenza okokufaka. Ishubhu lethusi lizosetshenziselwa i-Ice Machine Evaporator Assemblies, futhi ukufakwa kwe-soldering kwenzeka ngemuva kokufakwa kwamashubhu ngaphakathi kwenhlangano. Ukushisa kufanele kwenzeke kukholi yohlobo lwesiteshi ukuze inikeze ukufinyelela okulula, uma nje ukufakwa kweshubhu sekufakiwe. I-Solder ingaphakelwa ngesandla ngemuva kokushisa
Okubalulekile: 3/8 ″ Izindonga Zethusi Ezincane Ezindongeni no-900 Elbow
Isicelo: Ngokusebenzisa amandla we-DW-UHF-20kW okukhipha amandla okufakwa kwesimo esiqinile kanye nekhoyili yesiteshi ehlukile emithathu (3), kutholakale imiphumela elandelayo:
Ijoyini le-solder lekhwalithi lalibonwa ngokugeleza okwanele nokuthungwa komhlaba.
Izinsiza kusebenza: Amandla we-DW-UHF-20kW akhipha amandla wokufaka amandla afaka phakathi eyodwa (1) isiteshi sokushisa esikude esiqukethe i-capacitor eyodwa (1) 1.2 μF, kanye nekhoyili yesiteshi ehlukile emithathu (3).
Ukuvama: 200 kHz
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi induction soldering ithusi, i-induction soldering ipayipi yethusi, i-soldering ithusi, ipayipi ye-soldering yethusi, i-soldering tube yethusi, ukuxubha kwe-tuber coppr
Steel Soldering To Brass With Induction Heater
I-Soldering Steel To Brass With Induction IGBT Ukushisa Ukushisa
Inhloso Shisisa umhlangano wezixhumi ezincane zensimbi ezifakwe ngegolide kubhlokhi yethusi.
Okungenayo kokubalulekile. 1/8 ”(3.2mm) ububanzi izixhumi zensimbi ezifakwe ngegolide, isikwele esingu-1” (25.4mm) x x 1/4 ”
Ukushisa kwe-600 ° F (315.6ºC)
I-Frequency 240 kHz
Izinsiza kusebenza • Uhlelo lokufudumeza lokungeniswa lwe-DW-UHF-6kW olunekhanda lokusebenza elikude.
Inqubo I-coil yama-helical amabili asetshenziswayo ukuhlinzeka ngokushisa okufanayo ngomhlangano wezingxenye. I-Solder paste ne-flux zisetshenziswa endaweni ehlanganisiwe namandla asetshenziswa imizuzwana engama-20 ukugoqa izingxenye. Kuyafaneleka
Kudingeka ukuthungatha izingxenye ezikhundleni.
• Ukushisa okusheshayo, endaweni yangaphandle ezindaweni ezithile
• Amalungu ahlanzekile futhi ahlanzekile
• Ukucubungula okungenasici
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi high frequency soldering ithusi, high frequency soldering steel, induction soldering, induction soldering ithusi, induction soldering ithusi, ukufakwa kwe-soldering ukushisa, ukufakwa kwe-sordering steel, RF soldering ithusi, I-RF steel soldering, steel soldering ithusi